Ndakamupidigura ndikadhonza magaro ndokupomba beche kusvikira ndatundira mukati! - Nhau Dzevakuru
Ndakamupidigura ndikadhonza magaro ndokupomba beche kusvikira ndatundira mukati!
Last year mukadzi weshamwari yangu akarambana nemurume wake and aida pekuti agare since murume wake ainge akusabhadhara rent. Mukadzi wangu aida kuti ndiwirirane neshamwari yake but inini hameno zvaingoitika. Saka ndakabvuma kuti awuye kusvikira awana pake pekugara, tainge takuita zvese tese like pataiyenda out taiyenda tese, patowona late movie taiwona tese. Nerimwe zuva takati tichidya vakabva vatanga kuti they have shared everything kubva vachiri vana vadiki and even pavakayenda kuchikoro.
Two weeks Chipo achigara nesu mukadzi wangu akabva ayita business trip zvekuti she was going week rese kubva Monday achizodzoka Saturday makuseni, ndakamuperekedza ku Airport then ndakuda kudzoka zvikanzi take care of Chipo, ndakabva ndati akura uyo I am sure zvese zvaanoda anozviwana without my help zvikanzi ndati help her nezvese zvaanoda, ndakangoti if it’s for you babe ndinoita anything. That night ndakagadzira supper ndokubva ndadeedza Chipo ndikati huya tidye, after chikafu takawona a movie but handina kupedza ndokubva ndayenda kunorara since ndainge ndamuka early ndichiyenda kunosiya mukadzi wangu ku Airport.
Ndakayenda kubathroom ndokubva ndanogeza as always, kazhinji ndinorara ndakapfeka ma boxer angu but this night ndakangopinda ndisina kupfeka ndokurara hangu. Ndakatanga kunzwa kunyerekedzwa pamboro yangu pandikasvinura ndokuwona Chipo akaita kuzadza mboro yangu mumuromo make, ndakada kuita complain but ndainzwa musoro wemboro uchiita kurova pahuro yake ndokubva ndakurirwa nekunakirwa, this was the best yekudyiwa kwandakaitwa mboro.I reached out ndokubata mazamu ndinzwe munhu ainge asina kana kupfeka, ndaibata mazamu ake ndinzwe minyatso yake yainge yawoma ndokubva ndaita kudzvanya a little bit, Chipo ndokuita kakuchemerera kekunakirwa nezvandaiyita.
Chipo akamovha a little bit ndokubva ndakusvikira kubata magaro, so I grabbed garo rake ndichimudhonzera padhuze neni apa ndichinzwa ruoko rwangu ruchiyenda pakati pemakumbo. Ndakati ndichibata mukati mezvidya akabva avhura makumbo ndokubva ruoko rwangu rwananga straight pabeche apa ndainge ndakunzwa kudziya kujuice dzebeche rake hazvina kana kunetsa kupinza zvigunwe zvangu two mukati.
Ndakabva ndawana kag-spot and kaizvimbirira everytime pandaikakwizirira ndikanzwa mamuscles ebeche rake achinzvanya zvigunwe zvangu apa iye achichemerera nekunakirwa. Ndakaramba ndichikwizirira kag-spot kachibva kaita kuzvimba ndipo paakatanga kutunda ndikanzwa zvigunwe zvangu zvakudziya apa juice dziya dzichiyerera ndokubva ndakutonanzva hangu. The nectar inobuda mubeche is so tasty, I don’t think I could ever get enough. Chipo akabva adonhera pabed nekuneta kwaainge ayita.
Ndakamupidigura and grabbed her ndokuisa makumbo ake mudenga exposing beche rake nekutota kwarainge rakaita ndakaisa face yangu ndokutanga kuridya kusvira juice dzese dzapera and ipapo mboro yangu yainge yamira apo tumisodzi tuchidziya pamusoro wemboro yangu. Ndakabata 9 inch mboro yangu ndokubva ndainangisa pabeche raChipo apa chandaida kuita kupomba beche rake ndikanzwa akuita kuchemerera apa makumbo ainge achiri mudenga.
Ndakarova beche rake kusvikira apa kutenda apa machende angu achiita kurova magaro zvaiyita noise ichiti pa pa pa pa pa or twa twa twaa twaaa mwana achichemerera nekunakirwa. Ndakatanga kunzwa beche rake richisvinya svinya mboro yangu ndinzwe tsaaaaa apo achitunda futi, ndokubva ndakunzwa mboro yangu ichidziirwa ndiye tssssaaaaa tsaaaaa ndichitundira mukati make maChipo.
Ndakaseka ndikati so you two set me up zvikanzi ehe, I know maisvirana every night but nhasi it’s my night, izvozvi beche rangu ratotota nekunofunga kuda kusvirwa newe. Ndiri in the plane ndatomboyenda kubathroom kunopukuta after ndawona kuti ndatotesa nekungofunga kusvirwa, ndanga ndichitoda kutunda but ndakamirira nhasi manheru. Hatina kuzomirira manheru takati tichingosvika kumba takabva tatotanga kusvirana and after round one as much as mukadzi ainge ati husiku hwanhasi akabva adeedza Chipo zvikanzi huya tisvirane tese, haaa mazuva ano handisi kana kuwana mukana wekurara nekuti masvirirwo andaiyitwa manheru ega ega so mhani haasi efani.
Previous articleBasa rekabhinzi pamunhukadzi
Next articleNyoro naManager wepaLodge pataigara while Hubby Sleeps